26 | December | 2009 | Save Burma
အသျှင်ဥတ္တမ(နှစ်၁၃ဝ ပြည့်) အထိမ်းအမှတ် – (၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၉)
ရခိုင့်အာဇာနည် အာရှနီဝန်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်
အသျှင်ဥတ္တမ(နှစ်၁၃ဝ ပြည့်) အထိမ်းအမှတ်
(၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၉)
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ၁၈၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၈)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့၌ ရခိုင်ပြည် စစ်တွေမြို့ ရှိ ရူပရပ်တွင် ဖခင် ဦးစံ မြ နှင့် မိခင် ဒေါ်အောင်ကြွဖြူတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်နာမည် မောင်ပေါ်ထွန်းအောင် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ငယ်ရွယ်ချိန်အခါကတည်းက ပညာရေး ထူးချွန်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများက ရှင်သာမဏေ ၀တ်ပေးရာမှ ရှင်ဥတ္တမ ဘွဲ့အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၉နှစ်တွင် ရဟန်းပြုပြီး နောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့သို့ ရဟန်းဝတ်နှင့်ပင် သွားရောက်ခဲ့ရင်း နိုင်ငံရေးစိတ်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ နိုးကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ဘာသာ စကားပေါင်း(၉)မျိုးကို ကောင်းစွာတတ်မြောက်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကမ္ဘောဒီး ယား၊ ကိုးရီယား၊ အီဂျစ်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပတိုက်ရှိ ပြင်သစ်နိုင်ငံများ အပါအဝင် အာရှတိုက်မှ နိုင်ငံအများ အပြား တို့ကို ခရီးလှည့်လည်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဆရာတော်သည် ၁၉၂၀ ခုနှစ် တွင် ဗမာတပြည်လုံးသို့ လှည့်လည်ကာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး တရားများကို ဟောပြောခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဟောပြောမှုဖြင့် ၁၉၂၀ မတ်လ တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၁၂ လ အပြစ်ပေးခံရသည်။ ဆရာတော်သည် ၁၉၂၄တွင်လည်း“အစိုးရမကောင်းလျှင်မကောင်းဟု ဝေဖန်ခွင့်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးပဲ၊ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ငါတို့မှာ ရှိတယ်၊ ငုံ့မခံကြနဲ့” ဟု ပြည်သူများကို လှုံ့ဆော် ဟောပြောခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ထောင် ၃နှစ် ကျခဲ့ပြီး ၁၉၂၈တွင် တတိယအကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ဗြိတိသျှအစိုးရ ဘုရင်ခံချုပ်ကိုလည်း “ဆာ ရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် မင်းဗမာပြည်မှထွက်သွား ပါ” ဟူသော စာကို ရေးသား ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မှုခဲ့ပြီး ပျံလွန်တော်မှုချိန်တွင် သက်တော် ၆၀ နှစ်၊ ဝါတော် ၄၁ ၀ါ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ပျံလွန်ချိန်အထိ နယ်ချဲ့အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကို မြန်မာတပြည်လုံးက လေးစားခြဲ့ကသည်။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ အခမ်းအနားများ အမြဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ စစ်အာဏာရှင်များလက်ထက်တွင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်ကို အတုယူမှုများ ဖြစ်လာမည်ကို စစ်အာဏာပိုင်များမှ စိုးရိမ်လာသည့်အတွက် ဆရာတော်အား မေ့ပျောက်စေရန် သမိုင်းစာအုပ်များတွင် ရေးသားခွင့်များ ပိတ်ပင်ပြီး ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှလည်း ဆရာတော်သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားအနှီးရှိ ဦးဥတ္တမပန်းခြံ ကို ကန်တော်မင်ပန်းခြံ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုစေခြင်း၊ စစ်တွေမြို့ရှိ ဦးဥတ္တမပန်းခြံနှင့် ဦးဥတ္တမရုပ်တုကိုလည်း မွမ်းမံမှု မရှိခြင်းနှင့် ဆရာတော်ရုပ်တုကို ပူဇော် အရိုအသေပေးမှုများ၊ အခမ်းအနားလုပ်ခြင်းများကို တားမြစ်အရေးယူခြင်းများ ရှိသည်။ စစ်အစိုးရသည် ဆရာတော် ဗမာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပထမမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သည်ဆိုသော သမိုင်းအစဉ်အလာကို ဖျောက်ချင်ဇောဖြင့် စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် “ဂရက်တောက် မင်းထွက်သွား” စကားကို စစ်သမိုင်းပြတိုက်တွင် ပြသထားရာတွင် ဆရာတော်နေရာတွင် ဆရာတော်တပည့် ဦးဝီစာရရုပ်ထုဖြင့် သမိုင်းတွင် ယခုအထိ စစ်သမိုင်း ပြတိုက်တွင် ပြသထားသည်။။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ချင်ရင် နောက်မတွန့်ကြနဲ့။ ( ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ)
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်စောသူ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထင်ရှား ကျော်စောရခြင်း၏ အရင်းအမြစ်သည် ဆရာတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံအကျိုး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရခိုင်သားတို့၏ ဗီဇစရိုက် အကျင့်ဖြစ်သည့် ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊ ရင်ထဲတွင် ရှိသမျှကို မကွယ်မဝှက် ဘွင်းဘွင်းပြောဆိုတတ်မှု အပေါ် အခြေခံသည်ဟု ကောက်ချက်ချလိုသည်။
ဆရာတော်သည် နိုင်ငံရေးသမားတဦး မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံရေးအကျိုးဆောင် တဦးသာဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်တွင် နိုင်ငံရေးသမားတဦးကဲ့သို့ လက်ဝဲ၊ လက်ျာနှင့် လစ်ဘရယ်စသော နိုင်ငံရေးဝါဒများ မရှိခဲ့ပါ၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးဆောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ကောင်းစားရေးအတွက် ပရဟိတအလုပ် သက်သက်သာ ဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာတော်သည် မီးမောင်းထိုးပြ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေး အကျိုးဆောင်သူများတွင် အတ္တဟိတ ဆိုသော ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို လုံးဝအဓိကမထားကြပါ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်၊ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအား တပါးကျွန်ဘဝက လွှတ်မြောက်ရေးနှင့် လူသားရင်းမြစ် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးသည်သာ အဓိက အခြေခံ ခံယူကြပြီး မိမိအသက် ခန္ဓာ ဥစ္စာကိုပင် စတေးထားသူများပင် ဖြစ်ကြပါသည်။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအပါအဝင် ဝံသာနုခေတ်က ပုဂ္ဂိုလ်များ။။
၁၉၁၈ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ဥရောပတိုက်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်ပြည် စသည်တို့မှ ပြန်ကြွ၍ လာသောအခါ မြန်မာပြည်တွင် ဝိုင်-အမ်-ဘီ-အေ အသင်းက နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများကို စတင် လုပ်ကိုင်နေကြပြီ ဖြစ်ကြသဖြင့် ဦးဥတ္တမလည်း ဝင်ရောက်ကူညီကာ စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ဆောင်လေသည်။ ဤကဲ့သို့ စတင်လုပ်ဆောင်လျှင် လုပ်ဆောင်ခြင်းပင် အစိုးရ စုံထောက်များမှာ ဆရာတော်နောက်သို့ တကောက်ကောက် လိုက်နေခြင်းကြောင့် ဦးဥတ္တမအား သံဃာတော်များက မပေါင်းသင်းဝံ့ကြချေ။ ထို့ပြင် ဆရာတော် ပြောပုံ နေပုံတို့မှာ နိုင်ငံရေးဆရာတော်ပီပီ အနည်းငယ် ကြမ်းတမ်းရကား အရဟတ္တဓဇဂုဏ် နှင့် မညီညွတ်ဟုဆိုကာ ဆရာတော်အား မည်သည့်ကျောင်းကမှ လက်မခံဘဲနေသောကြောင့် အင်းစိန် ဒိစတြိတ် သမိုင်းမြို့ရှိ အိမ်တအိမ်တွင် သတင်းသုံး နေရရှာလေသည်။
ထိုအချိန်အခါတွင် သူရိယသတင်းစာက ဦးဥတ္တမ၏ နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ပုံများကို အထူးတလည် ထောက်ခံအားပေးသည့်ပြင် ဆရာတော်၏ အပြုအမူမှန်သမျှ မှန်ကန်ကြောင်းကို နေ့စဉ်လိုပင် ရေးသားကြ၏။ ဤနည်းအားဖြင့် တစတစ သတင်းစာဖတ်၍ ခေတ်မှီသောလူများ နိုင်ငံရေးမျက်စိ ပွင့်၍လာသောကြောင့် ဦးဥတ္တမဟောသော တရားပွဲများသို့ သွားရောက်ခါ နိုင်ငံရေးတရားများကို နာစပြုကြလေသည်။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမမှာ များသောအားဖြင့် ဦးလှဖေ၊ ဦးဘဖေတို့နှင့် အတူ သူရိယ သတင်းစာတိုက်တွင် သတင်းသုံး၏။ ဦးဥတ္တမ နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိုခေတ်အခါက ခေတ်၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သော ဦးဘဖေ၊ ဦးလှဖေ စသော ပုဂ္ဂိုလ်များက အားပေးလေ၏။ ၄င်းတို့၏လုံ့လကြောင့် သူရိယသတင်းစာ၏ အကူအညီဖြင့် တိုင်းသူပြည်သားများ၏ မျက်စိပွင့်လင်း၍ လာလေသည်၊ သို့ဖြစ်သဖြင့် သူရိယသတင်းစာ၏ ထိုစဉ်က ဆောင်ရွက်ချက်များကို တိုင်းသူ ပြည်သူသားများက ကျေးဇူးတင်ထိုက်လေသည်။
ဦးဥတ္တမမှာ နိုင်ငံရေးတရားကို ကြမ်းကြမ်းဟောတတ်သည့်အတိုင်း သံဃာတော်များ ကျောင်းတွင် ကျိန်း၍ မနေကြရန်နှင့်။ တိုင်းပြည်သည် ကျွန်ဘဝရောက်၍နေသောအခါ တိုင်းသူပြည်သားများမှာ ကျွန်များဖြစ်၍ ကျွန်များ ကိုးကွယ်သော ဘာသာသည်လည်း ကျွန်ဘာသာနှင့် ကျွန်သာသာနာပင်ဖြစ်မည်။ ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်မှသာလျှင် သာသနာ ကြီးပွါး ထွန်းကားနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းများတွင် ကျိန်း၍နေခြင်းငှါ မသင့်ကြောင်း သံသာသမဂ္ဂီ ဖွဲ့စည်းကာ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးစားသင့်ကြောင်း သံဃာတော်များအားအား သတင်းစာမှ၎င်း။ တရားဟောရာ၌၄င်း။ ဆွဲငင်ပြောဆိုလျှောက်ထားသဖြင့် သံဃာတော်များမှာ သာသနာ ညှိုးငယ်သည်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ရခြင်း။ တကာတကာမများမှာ တနေ့တခြား အောက်တန်းကျ၍လာခြင်း ဆင်းရဲခြင်း။ သာသနာပြုမင်း ရှိမှသာလျှင် သာသနာစည်ပင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်တို့ကို သတိရကာ နိုင်ငံရေးတွင် စိတ်ဝင်စားစ ပြု၍လာတော့သည်။
ဦးဥတ္တမသည် ထိုစဉ်အခါက လူငယ်စုများဖြစ်ကြသော ဦးဘဖေ၊ ဦးသိမ်းမောင်၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးမောင်ကြီး စသောသူများ၏ အားပေးချက်အရ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၎င်း။ ဗိုလ်တထောင်ဘုရား၌၄င်း။ ဗိုလ်တထောင် လွှစင်တန်း၌၄င်း။ တရားဟောပြောရာတွင် အစဦးက (၃ဝ)/(၄ဝ)မျှ လာရောက်၍ နိုင်ငံရေးတရားကို နာကြသော်လည်း တစတစ တရားနာ ပရိသတ်တိုး၍ လာလေသည်။ ဤသို့ဟောပြောရာမှ ရန်ကုန်မြို့တွင် သာမဟုတ်၊ တောနယ်များသို့လည်း ကြွရောက်ဟောပြော၏။ ထို့နောက် ၁၉၂၁ ခုနှစ် ဒေးဒရဲ ဆူးကလပ်ရွာတွင် တရားဟောပြောသည့်အတွက် ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) အစိုးရ အကြည်ညိုပျက်မှုနှင့် တရားစွဲခံရ၏။ ထို့ကြောင့် ပုသိမ်နယ် ကျောင်းကုန်းတွင် တရားဟောနေစဉ် ဖမ်းဆီးပြီးလျှင် ဖျာပုံမြို့သို့ ယူဆောင်ပြီး၊ ဖျာပုံမှတဆင့် မအူပင်ရုံးသို့ လွှဲပြောင်းကာ ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်း ခံရလေသည်။
ဤသို့ ဦးဥတ္တမအား အပြစ်ပေးလိုက်သောအခါ တပြည်လုံး လူရော သံဃာပါ နိုးကြားလာကြပြီးလျှင် နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ် အထူးဝင်စားလေတော့သည်။ သံဃာတော်များမှာလည်း အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေခြင်းငှါ မသင့်ပြီဟု ယူဆပြီးလျှင် ရန်ကုန် သရက်တော ကျောင်းတိုက်နှင့် ဗဟန်းတိုက်များတွင် သံဃသမဂ္ဂီအသင်းများကို စတင် တည်ထောင်လေသည်။ ထို့နောက် အောက်မြန်မာပြည် တဝှမ်းလုံးတွင် သံဃသမဂ္ဂီ အသင်း (၃၇)သင်းကို တည်ထောင်ပြီးစီး၏။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ထောင်ကျ၍ သံဃာတော်များနှင့် လူထုကြီး ပူးပေါင်းကာ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကြီး အရှိန်အဟုန် မြင့်မားလာခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ နှစ် (၁၃၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆရာတော်၏ အတွေးအမြင်များကို ရဟန်းရှင်လူ အပေါင်းနှင့် တပ်မတော် အတွင်းရှိ သားကောင်းစစ်သည်များထံသို့ နိုင်ငံရေး အကျိုးဆောင်စိတ်ဓါတ်များ နိုးကြွစေရန် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
အာသျှနီဝန်း ရခိုင့်အာဇာနီ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ နှစ်၁၃၀ ပြည့်နိန့့်ု့ ၂၀၀၉ဒီဇင်ဘာလ(၂၈) ရက်နိန့်ကျရောက်မည် ဖြစ်ပ်ါသောကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပဟိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးသို့ အသိပီး တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
Tagged with ဦးဥတ္တမ
Download – Pseudo-democracy
Tagged with Kyaw Kyaw Soe
World focus on Burma (26-12-2009)
Bangladesh – India – Myanmar Tri Nation Gas Pipeline: The Dream
Energy Bangla – Khondkar Abdus Saleque – ‎
Details of oil and gas contracts in military ruled Burma are well-guarded secrets. Daewoo International purchased exploration rights throughaProduction …
Junta Buys 230 Military Aircraft in 21 Years
The Irrawaddy News Magazine – Wai Moe – ‎
With its recent purchase of 20 MiG-29 fighter jets, Burma’s military junta has acquiredatotal of 230 military aircraft since seizing power ina…
Weekly Business Roundup (December 26, 2009)
The Irrawaddy News Magazine – William Boot –
… and will be shipped viaapipeline to be built through Burma. Daewoo hasa51 percent share in the Shwe project, inapartnership with state Myanmar Oil …
Bishop’s dinner Holiday tradition
Worcester Telegram – Lisa Eckelbecker –
About 50 refugees from Burma, also known as Myanmar, many of them children wearing traditional red clothing and head scarves, spent their first Christmas in …
Burmese influx drops as jobs become scarce
Fort Wayne Journal Gazette – Angela Mapes Turner – ‎
Oppressed refugees have been fleeing Myanmar, as Burma is called by its ruling military government, for decades. Since the 1990s, many have been sent to …
Indian Shans to hold seminar
Shan Herald Agency for News – ‎
“There will be scholars from Burma, Yunnan and Guangxi attending the seminar,”asource told SHAN. Tais live in the Brahmaputra valley in Northeast India in …
Child soldiers: trafficked victims by the Myanmar regime
Examiner.com – ‎
The Myanmar regime has shown increasing efforts to fight against human trafficking of the Burmese women. The military junta closed Memorandum of …
Chinese border town emerges as new front line in fight against human trafficking
Washington Post – Keith B. Richburg –
Burma is also known as Myanmar. “In the villages bordering Myanmar, there are some people working as matchmakers, ” she said. “And some of them are human …
နှစ်ကူး အဓိဌာန် – အကြောင်းနှင့်အကျိုး
Download – New Year Resolutions – Casue and Effect